Samachar Batika || News from Nepal » जीवनसाथीसँग अतितका कुरा लुकाउने गर्नुभएको त छैन ?
जीवनसाथीसँग अतितका कुरा लुकाउने गर्नुभएको त छैन ?
हरेक मानिसको केही न केही अ’तित हुन्छन् । कसैको अतित राम्रो हुन्छ भने कसैको अतित स’म्झनै मन नलाग्ने पनि हुन्छ । राम्रो अ’तितको बारेमा त प्राय सबैलाई जा’नकारी हुन्छ । तर जसको वि’गत अलिक पी’डादायक र नराम्रो हुन्छ । त्यस्तो अ’तितलाई उनीहरु कसैसँग सेयर गर्न चाहँदैनन् ।
उनीहरु त्यस्ता अ’तितलाई बि’र्सन चाहन्छन् र कसैले त्यसको बारेमा कुरा नगरोस् भन्ने चाहना उनीहरुको हुन्छ । त्यस्तो अ’वस्थामा यदि तपाईंको कसै’सँग स’म्बन्ध गाँ’सिदैछ र तपाईंको अ’तितले नयाँ स’म्बन्धमा पनि असर पुर्‍याउँछ भने त झन् त्यस्ता अ’तितलाई सकेसम्म लुकाउन नै खोजिन्छ ।
तर, आफ्नो बितेको घटनाहरु सबै लुकाउनु मात्रै स’मस्याको स’माधान होइन । यदि तपाईंको स’म्बन्ध भइसकेपछि तपाईंको अ’तितको बारेमा तपाईंको साथीलाई थाहा भयो भने झन् नराम्रो र तपाईंप्रतिको वि’श्वास पनि गुम्न सक्छ । कहि’लेकाहीँ कुनै अ’तित जति गर्दा पनि लुक्न सक्दैन ।
त्यसैले लुकाउन नसकिने र स’म्बन्धमा असर पुर्‍याउने किसिमको अतितलाई साथीसँग सेयर गर्नु राम्रो हुन्छ । कुनै-कुनै अ’तितलाई लुकाउनु भन्दा सबै सेयर गर्नु बु’द्धिमानी हुन्छ । आफ्नो बि’गतको बारेमा सबै कुरा सेयर गर्नाले दुबैमा एक-अर्का प्र’तिको वि’श्वास र प्रेम बढ्छ ।
रो’मान्टिक स्टोरी भन्नुपर्छ
तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई आफ्नो इ’तिहासको रो’मान्टिक घटनाको बारेमा भन्नु आ’वश्यक हुन्छ । त्यसो गर्नाले तपाईंहरुबीच वि’श्वास बढ्छ । तर, यदि तपाईंले आफ्नो अ’तितका रो’मान्टिक घटना आफ्नो जीवनसाथीलाई बताउँदा उसको मुड र समयलाई ध्यान दिनु आ’वश्यक हुन्छ । यदि सही समयमा आफ्नो अ’तितका कुरा भन्नुभयो ।
भने उसले त्यसलाई स’कारात्मक रुपमा लिन सक्छ र यदि समय सही भएन भने यसले तपाईंहरुबीच मन’मुटाव पनि उ’त्पन्न हुनसक्छ तपाईं र तपाईंको अ’तितको स’म्बन्ध प्राय मानिसहरु ब्रे’कअपपछि पनि आफ्नो अ’तितका साथीसँग स’म्बन्ध कायम नै राख्छन् । यदि तपाईंको जीवनमा पनि त्यस्तो स’म्बन्ध छ ।
भने उसलाई आफ्नो जीवनसाथीसँग प’रिचित गराउनु आ’वश्यक छ । त्यसो गर्नाले तपाईंको जीवनसाथीलाई तपाईंप्रति कुनै शं’का-उप’शंका रहँदैन । आफ्नो मा’नसिक स’मस्याहरुका बारेमा पनि बताउनुपर्छ यदि तपाईंलाई पहिला कुनै मा’नसिक स’मस्या थियो भने त्यसको बारेमा तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई बताउनु आ’वश्यक छ ।
आफ्नो बि’गतमा भएका स्वा’स्थ स’मस्याहरु आफ्नो जीवनसाथीलाई बताउनु अति नै आ’वश्यक छ । यस्ता कुराहरु लुकाएर राख्नाले पछि स’म्बन्धमा नै नराम्रो असर पुग्न सक्छ । आ’र्थिक स्थि’तिको बारेमा पनि बताउनुपर्छ यदि तपाईंको अ’तितमा कुनै कर्जा अथवा लोन लिनु भएको थियो भने त्यसको बारेमा आफ्नो जीवनसाथीलाई बताउनु आ’वश्यक छ ।
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०४:४२